Hiran State - News: HS:-YAA UGAR NAQAYA DOWLAD IYO DASTUUR ?
HS:-YAA UGAR NAQAYA DOWLAD IYO DASTUUR ?
HS:-Mudnaanta dalka iyo dadka waxaa ku muransan dowlad iyo dastuur, mid waliba wuxuu isku arkaa inuu muhiim u yahay dalka iyo dadka marka lala barbar dhigo kan kale. Haddaba waxaa muuqata sida mid waliba uu ugu doodayo isa siinta dalka iyo dadka.
Dastuur: Waxaan ahay mid dadku ku heshiiyaan in ay ku wada dhaqmaan si siman oo ka fog dulmiga, waxaan kala ilaaliyaa isku xadgudbka, kala eexashada iyo is maandhaafka. Waxaan dhisaa dowlada oo aan ku hagaa iney hirgliso waxa dadku ku heshiiyeen, waan ka muhiimsanahay kana horeeyaa dowlad.
Dowlad: Wuu iska hadlay dastuur, wuxuuna ku riyooday jiritaan aan suuragalin aniga la’aanteyda, waxan ahay kan dhisa sharafta dalka iyo dadka, waxaan gacan adag ku qabtaa cid kasta oo wax dumineysa ama wax dulmisay. waxaan ahay ilaaliyaha xuduuda dalka iyo kheyraadkiisa, dadka waxaan baraa sharaf ku noolaanshaha. Sidaa daraadeed waxaan ahay muhiim mana jiri karaan dad iyo dal aniga la’aanteyda.
Dastuur: Ceebeey tacaal, ma dowlada wax gumaadda hadii aanan aniga joogin, ku xad gudubta dadka xuquuqdooda. Aniga waxaan ahay kan dhisa dowlada oo jeexa habka dowladi ku timaado, waxaa kala xadeyaa qaabka dowladnimada, dadka waxaan u cadeeyaa sida ay dowlada u shaqeyso mana iman karto dowlad aniga oo aanan joogin, sidaa daraadeed anigaa ka horeya kana muhiimsan dowlad.
Dowlad: Is maqiiq badanaa!, horta yaa ku ixitiraama oo kuxushmeeya? Waxaad tahay xuruuf meel taala oo aan xitaa is difaci Karin, dadkii kitaabka ALLE ku dhaartay ayaa habkey doonaan u dhaqmay, aniga ayaa ku dhisa, cid kale oo ku dhisi kartaa ma jirto, dadka ayaan kuu weydiiyaa afti iney ku ogolaadaan kadibna amar ku siiyaa dadka iney ku ilaaliyaan. Aniga haddii aanan jirin dadka aftidooda ma heleysid sidaa ayaad ku tahay wax kama jiraan. Aniga oo aanan iman dadka iyo dalka waa dulman yihiin, marka waa muhiim inaan imaado adiga hortaa.
Dastuur:Xoog iska raadis badanaa!!, waxaad dooneysa in aad sharci daro iska joogto, boobto hantida dadka, cid ku waabatana aysan jirin oo aad is dhaxalsiiso wax ummad ka dhaxeeya. Waxaan kaa hortaaganahay waa intaa oo aad dooneysid inaad xalaashato, dadkana aad ku shaqeysato. Waxaan ahay dadka u qeybiya dowladnimada kana ilaaliya is dhaxalsiinta hanaanka dowladeed. Aniga oo aanan iman dowladi ma iman karto.
Dowlad: Waa ku fahmay saxib, waxaad u socotaa waa gartay, waxaad dooneysa dalka inaad gacanta ka bixiso inta la muransan yahay dowladna loo waayo, waxaad ka shaqeyneysaa in dadku dhibaatoodo dalka la sii bililiqeysto, waxaad jeceshahy in dadku qoxooti sii ahaadaan, dagaalku sii socodo oo leysku hortaagnaado looma dhama!.
Saxiib dastuur la,aan dalka waa nabadeeyaa, dadka iyo dalka sharaf u yeelaa, waxaan la macaamilaa aduunka waxaan dhistaa adeega, ma xusuusataa adiga la,aantaa inaan dalka qiimo u yeelay markii adigoo wareersan aan ku afgambiyay (1969) oo aan dadka walaaleeyay dalkana magac u yeelay; yaa kuu baahnaa? Dadka wey ku hilmaameene ma iminkaad dadka is tuseysaa. Haddaba doodaan muranka badan ee leys mari la’yahay waxaa ugu dambeyn kala garqaaday Nibiriga badda ku jira kadib markii ay xal u waayeen intii dhulka degenayd.
Waxaa laga doonayaa Nibiri in uu kala xukmiyo in dastuurku gar leeyahay oo ay mudan tahay inaan dhisano dastuur na wada qanciya oo loo dhan yahay, aan lahayn cilad ka didisa dadka uu ka dhaxeeyo? Ma sugnaa ilaa aan iska afgarano oo aan raacnaa dooda dastuurka? mise dooda dowlada ee ah in talo faraha ka baxeyso inta reer dastuur muransan yihiin ayaa dowlad dhisanaa? Gabagabadii Nibiri wuxuu go,aamiyay in haddii dastuurka la isku raaci waayo oo ay diidaan akhyaarta la weydiistay iney ansaxiyaan aan dib loo dhigin in laga baxo kumeel gaar oo dowlad dhexe la dhisaa laguna dhisaa Dastuurkii 60ka kadibna dowlada cusubi ay turxaan bixisaa dastuurka dadkana afti ka qaadaa muddada ay xafiiska hayaan.
Waxaa qasab ah in aan marnaba la baajin in dowladnimo la gaaro ayuu ku soo gabagabeeyay xaakim Nibiri. Go’aankaas isaga ah wey ku qanceen labada doodu ka dhaxeysay ee Dowlad iyo Dastuur.
Maxamed Iidle (Xiireey)
· admin on May 02 2012 01:28:52 · 0 Comments · 1822 Reads ·
14,581,260 unique visits